Aung Win Hein (Noble): 07/14/11
" အသစ် စတင်ကြပါစို့..."
လုပ်သင့်တာတွေလည်း လုပ်နိုင်ဖို့ ( ကြည်မင်း )
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ ၊
ဆုတောင်း= လိုချင်တာသာ ပြောပြီး၊
ဆုပန်= လိုချင်ခြင်း+ဒါတွေလုပ်မည်ဟုလုပ်ငန်းနဲ့တကွ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း။
ကိုယ်က အရှုံးထားပြီး တိုက်နေသူအဖို့
အခက်ခဲဆုံးသော လမ်းကြောင်းကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။
( ဟားဘတ်ကက်ဆင် )
လက်အစုံ၊ခြေအစုံ၊ ဦးနှောက်တစ်လုံးနဲ့လူက ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ ။
တစ်ရက်မှာ ငါ့အတွက် (၁၆)နာရီတောင်
အချိန်ဆိုတာ ကိုယ့်ရှေ့ကျလာတဲ့ ရွှေဒင်္ဂါးတစ်ပြားနဲ့တူတယ်။
# သဘာဝ သက်စောင့်ဆေးကြီးများ #
၃။ ။ချုပ်တည်းခြင်း/ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊
အာသာဆန္ဒကို ဦးစွာ ချိုးနှိမ်ပါ။
အစာစားပြီး တစ်နာရီမှ နှစ်နာရီ၊
အစာမစားမီ ဆယ်မိနစ်မှ ဆယ့်ငါးမိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ။ဘာသာရေးကို အလေးထားပါ။
NEW START ( အသစ် စတင်ကြပါစို့ )
N= Nutritions Food
T=Temperate, drug,Free Living
ငါ့ ဒိန်ခဲကိုဘယ်သူ နေရာရွေ့ထားသလဲ
( တင်မောင်မြင့် )
Who Moved My Cheese ? by Dr.Spencer Johnson.
သင်ဟာ အပြောင်းအလဲ မလုပ်လျှင် ဘဝဆုံးခန်းတိုင်သွားနိုင်တယ်။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ကျော်လွှားပြီး သင်ရှေ့ဆက်သွားရင်
( ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း)
မထေရ်ကြီး တို့စကားဝိုင်းနားကို ရဲရဲသာကပ်၊
( ဘုရားကြီးတိုက်၊ အမရပူရဆရာတော် )
( တောင်မြို့၊ညဝါအကျော်ဆရာတော် )
ကိုယ့်ပညာကို ပါရမီမြောက်အောင်လုပ်ထားခဲ့နိုင်မှ ပညာက သေရွာပါတယ်။
၂။ ။တရားဓမ္မကို နှလုံးသွင်းပြီးရင်လည်း ဆိတ်ဆိတ်နေရမယ်။
တတ်နိုင်သလောက် မပြောပဲ နေတာ ကောင်းတယ်။
“ ဘယ်လို အာရုံမျိုးနဲ့တွေ့တွေ့
ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား။ ”
“ ယူတတ်မှ ပညာရ…”
အယူအဆ မတူတဲ့သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
“ အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်…”
Ø အန္တရာယ်ကို ရင်မဆိုင်တာကမှ
Ø အခက်အခဲကို ရင်မဆိုင်တာက
Ø သေချာတာကိုမှ လုပ်ချင်တာ
Ø ဆုံးရှုံးမှုကို ကြောက်လွန်းတာ
“ အသဲ၊ အသက်၊ ဘဝပေးဖို့အသင့်…”
· *မနံက်ဖန် ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတာ
တစ်ခုကို သိလာရင် ပိုကောင်းတာကို
အဲဒါကို ဘဝပေးပြီး လုပ်ပါ။
“ ဘဝရှိချင်ရင် အဖြေရှာ…”
“ အကျိုးပြု ပုဂ္ဂိုလ်…”
“ Quality Time…”
“ Quality Time…” ဖြစ်မယ်။
· ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိပြီး
“ Quality Time…” ဖြစ်နေမယ်။
“ Quality Time…” ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။
“ သေပြီးတဲ့ နောက်မှာ…”
ရာထူး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ဂုဏ် အဆင့်အတန်း
ဘာဘဲလုပ်လုပ် ၊ စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့
လုပ်မယ်ဆိုရင် အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ပါရမီတစ်ခုခုကို
အလုပ်ထဲက အတွေ့အကြုံထဲက ဉာဏ်ပညာရမယ်။
“ ဝါသနာကို ပျိုးထောင်ပါ…”
ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အလေ့အကျင်ကို လုပ်သင့်တယ်။
“ နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါ။….”
“ မသိလည်း အောင်မြင်…”
“ အကောင်းဆုံး လုပ်မယ်…”
( Take the risk =စွန့်စားပါ )